'နောက်ပိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ မြိုင်ရဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ ကာရိုက်တာတွေကိုပဲ ပရိသတ?? - Yangon Media Group
‘နောက်ပိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ မြိုင်ရဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ ကာရိုက်တာတွေကိုပဲ ပရိသတ??
ဇာတ်လမ်းတွဲများဖြင့် ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်မေမီကိုကိုနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း . . .
မေး- လက်ရှိလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု လေး ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- အခုလက်ရှိမှာတော့ သရုပ်ဆောင်သင်တန်း လေး တက်နေပါတယ်။ သင်တန်းလေးပြီးရင်တော့ မတ်လထဲမှာ ”လိပ်ပြာနှောင်ကြိုး”ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲလေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်လမ်းတွဲ လေးထဲမှာလည်း အခြားဇာတ်ကားတွေနဲ့ မတူတဲ့ကာ ရိုက်တာ ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ မေမီ့ကိုတွေ့ရမှာပါ။
မေး-Forever Group နဲ့ စာချုပ်ကရော ဘယ်လို ရှိလဲ။ အပြင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေနဲ့ရော လက်တွဲဖို့ရှိ မလား။
ဖြေ- မေမီတို့ Forever Group နဲ့ စာချုပ်မှာက အပြင်ကထုတ်လုပ်ရေးတွေက မေမီတို့ကို ကမ်းလှမ်း လာရင် ရိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတော့ ရိုက် ခွင့်မရှိပါဘူး။ ရုပ်ရှင်တွေ၊ MTV တွေကြိုက်တာ ရိုက်လို့ရပါတယ်။ စာချုပ်ကတော့ လောလောဆယ် သုံးနှစ်ကျန်ပါသေးတယ်။ သုံးနှစ်ပြီးလို့ စာချုပ်အသစ် ထပ်ပြီး ချုပ်မယ်မချုပ်ဘူးဆိုတာကတော့ မသိသေး ပါဘူး။ Forever Group က မေမီ့ကို သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ် မွေးဖွားပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
မေး- Star Award ကပေးမယ့် ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ”ပျားရည်အိုင်” ဇာတ်လမ်းတွဲပါနေတယ်ဆိုတော့ စိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ- မေမီတို့ ဇာတ်ကားလေး အဲ ဒီလိုပါတယ်ဆိုတာ ကို အခုမေးမှပဲ သိရပါတယ်။ ကိုယ်ကအခြားအလုပ် တွေလည်းများနေတာကြောင့် မသိတာဖြစ်ပါတယ်။ အ ခုလိုပါတယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးဝမ်းသာပါတယ်။
မေး- အခုနှစ်ထဲမှာရော ဘယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ ဘယ်တော့လောက် ထုတ်လွှင့်ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ- မေမီ့ကို ”ပျားရည်အိုင်”ဇာတ်ကားထဲက မြိုင်အ ဖြစ် ပရိသတ်တွေက အသိများကြတယ်။ အခု ၂ဝ၁၉ ထဲမှာလည်း အခြားကာရိုက်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ လည်းအများကြီးထပ်ပြီးထုတ်လွှင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ အခုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ Toxic Season2ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထုတ်လွင့်ပြသနေပါတယ်။ နောက် ”တတိယဆုံမှတ်”ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးလည်း လွှင့် တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး- နောက်ပိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာရော ဘယ်လို ကာရိုက်တာမျိုးတွေနဲ့ မြင်တွေ့ရမလဲ။
ဖြေ- နောက်ပိုင်းရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ကတော့ ရှေ့မှာရိုက်ထားတဲ့ မြိုင်ရဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ ကာရိုက်တာတွေကိုပဲ ပရိသတ်တွေမြင် တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြနေတဲ့ Toxic Season2မှာဆိုရင်လည်း မေမီက ယိမ်းဆိုတဲ့ သတင်းထောက် မလေးတစ်ယောက် ကာရိုက်တာအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ”တတိယမြောက်ဆုံမှတ်”ဆိုတဲ့ ဇာတ် လမ်းတွဲမှာဆိုရင်လည်း ယောက်ျားလေးဆန်တဲ့ ကာ ရိုက်တာမျိုးဖြစ်မယ်။ Tomboy ကာရိုက်တာမျိုး တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်ကြီးတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်အဖြစ် မြင်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ချွဲချွဲနွဲ့ နွဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထား တဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မေမီကတော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်ကာရိုက်တာကို အကောင်းဆုံးကြိုး စားတယ်။ Feedback ကတော့ ပရိသတ်တွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်။
မေး-ကိုယ်ရိုက်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်အားရတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲဆိုရင်ရော ဘယ်ဟာတွေဖြစ်မလဲ။
ဖြေ- ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအများကြီး ရိုက်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ထပ်လည်း ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ပိုအားရပြီး ပရိသတ်လည်းကြိုက်တဲ့ ကိုယ်လည်းနေရာရတဲ့ ဇာတ် လမ်းတွဲတွေဆိုရင်တော့ ”ကိုလူပျို၊ မာန်၊ ပျားရည် အိုင်၊ Toxic Season 2၊ တတိယမြောက်ဆုံမှတ်” နောက် အခုရိုက်မယ့် ”လိပ်ပြာနှောင်ကြိုး” ဇာတ်ကား မှာဆိုရင်လည်း နေရာရပါတယ်။
''ကျွန်တော်တို့ ဈေးလျှော့ပေးလို့လည်း ဗီဒီယိုလောက ပြန်မကောင်းလာနိုင်ပါဘူး''ကျော်ကျော်
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားခုနစ်ဦး တရုတ်နိုင်ငံ၌ မှို အဆိပ်သင့်
ဘောလုံးက အချစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဘောလုံး အတွက်သာ အသက်ရှင်နေသည်ဟု ပေါ့ဘာ ဆို